MKV waa qaab weel multimedia ah in ka mid noqon kara video, audio, subtitles iyo metadata kale. Haddii MKV videos aad mar hore ku jira track Cinwaan, mar walba waxa aad ka badalan karaa on / off in ciyaaryahanka warbaahinta socon KMPlayer ama VLC Media Player. Sida loo soo saaro subtitles ka MKV? Waxaad isku dayi kartaa barnaamijka 2aad talinayaa ee maqaalka. Ogow in mararka qaarkood, subtitles way gubteen oo ku MKV video. Waxa aan hoos on this page.
Ka hor inta soo saarida Cinwaan MKV, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad si loogu badalo MKV in AVI ama qaabab kale la Cinwaan. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijka talinayaa 1da si taas loo gaaro. Codsiga waxa kale oo kuu ogolaanaysaa inaad ku darto Cinwaan in MKV ama qaab kasta oo la doonayo.
Talo soo jeedinta 1: Wondershare Video Converter Ultimate - dar Cinwaan in MKV iyo Beddelaan in qaab kasta oo la doonayo
Talo soo jeedinta 2: MKVExtractGUI-2 - Waraaqda Cinwaan ka MKV
# Talo soo jeedinta 1: Best MKV Cinwaan Converter
Beddelaan faylasha sida MKV, AVI, MP4 iyo MOV in kasta oo ah qaabab kale haddii la Cinwaan.
Ku dar subtitles in filimada MKV adiga oo aan ka kaaftoomi kasta.
Ku dar metadata in filimada, bandhigyada TV iyo videos guriga.
Maxaad Dooro Video Converter Ultimate
Beddelaan file kasta oo la Cinwaan
Codsigan taageertaa qaabab video kala duwan. Just dajiyaan files si aad u Converter taasi oo loogu badalo in ay qaabab kale oo aan khasaaraha tayo leh.
Ku dar Cinwaan
si fudud Waxaad ku dari kartaa Cinwaan u soo bixi in aad video. By ku daray Cinwaan, waxa ay noqon doontaa inta badan ka sahlan si aad u daawato filimada shisheeye.
Shakhsiyeeyo aad Cinwaan
codsiga Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad kaamil Cinwaan ka. Waxaad astaysto Cinwaan ugu keeno, tusaale ahaan, ka font, midabka, size, booska, hufnaan, iyo iwm
Subtitles kala duwan taageerto
helay video aan Cinwaan? Codsiga Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad ku lifaaqdo Cinwaan in qaabka SRT, dameer, SSA.
Baro wax badan oo ku saabsan Video Converter Ultimate >>
Sida loo dar Cinwaan in MKV iyo Beddelaan in qaab kasta oo la doonayo
Wixii intaa raaciyay Cinwaan in files MKV aad (files kale ayaa sidoo kale la heli karo), kaliya waxa ay halkan ka heli, Sida loo dar Cinwaan in MKV Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah) .
Waxaad ogaan doontaa sida in aad ku darto Cinwaan aad soo bixi in files MKV aad ee qaybta 1aad ee qodobkan in. Qaybta 2aad, waxaa kuu sheegayaa sidaad u edit iyo dar aad Cinwaan u gaar ah si ay u MKV. Sidoo kale waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah aqoonta ku saabsan Cinwaan qaybta 3aad.
Talooyin: Sida loo Download hoosaad u Movies DVD iyo TV muujinaysaa
# Talo soo jeedinta 2: MKVExtractGUI-2
MKVExtractGUI-2 oo loo isticmaali karo sida Cinwaan shawladda MKV Macdan Cinwaan ka MKV in dameer, SRT ama file hoosaadka. Waxay u baahan tahay mkvtoolnix. Ka sokow soo saarida Cinwaan, Laydinka soo karaa durdurrada mkv, kala video iyo maqal ah in faylasha gaar ka ah file MKV ah. Hadda socdaan iyada oo loo marayo tallaabooyin fudud si ay u soo saaro subtitles ka MKV videos la subtitles MKV free shawladda.
1. Ku rakib oo ay maamulaan MKV Cinwaan shawladda
Labada MKVExtractGUI-2 iyo mkvtoolnix waa freeware. Waxaa Download siday u kala horreeyaan in your computer. First rakibi mkvtoolnix ka dibna ku riday MKVExtractGUI-2.exe in folder mkvtoolnix ah. Waxaad ugu dambeyntii laab laabi karo guji MKVExtractGUI-2 si ay u maamulaan.
2. Dooro MKV Cinwaan Track
Guji "..." badhanka si uu u furo MKV video la Cinwaan. Waxaad arki doonaa wax sida kor ku xusan, iyadoo dhowr ka mid ah kuwan raadkaygay video, audio iyo subtitles. Dooro Cinwaan aad rabto in aad Macdan MKV video.
3. Cinwaan Macdan MKV in dameer, SRT, hoosaadka, iwm
Ugu dambeyntii, guji "Waraaqda" badhanka si loo badbaadiyo Cinwaan ka MKV si aad u computer. Cinwaan labaad waxay la soo saaro doonaa in dameer, SRT ama qaab file hoosaadka, iyadoo ku xiran qaab asalka ah ee Cinwaan in file MKV.
> Resource > Video > MKV Cinwaan shawladda - Sidee Macdan Cinwaan ka MKV